सडकमा धान रोप्दै बनाउन दबाब (तस्विर/भिडियो) -
सडकमा धान रोप्दै बनाउन दबाब (तस्विर/भिडियो)
१५ असार २०७७, सोमबार २०:१८ । ककनी, नुवाकोट
पासाङल्हामु राजमार्गस्थित काठमाडौं त्रिशुली सडकमा धान रोप्दै बनाउन दबाब दिएका छन् ।
सोमबार असार १५ गते धान दिवस मनाउदै सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र न्यौपाने कन्स्ट्रक्सनले जेभीलाई सडक बनाउन दबाब दिएका हुन् ।
वर्षौदेखि सडक बिस्तारको काम अलपत्र पारेको भन्दै संघर्ष समितिले नाराबाजी गर्दै अोखरपौवाको सडकमा धान रोपेका हुन् । बर्खाभरि सडक हिलोमैलो भो ! हिउँदमा झनै धूलोमैलो भो ! हे ठेकेदार परमेश्वरी ७ वर्ष भयो अब त अति भो ! भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
उनीहरुले यसपालीको धान दिवस सडकमै असारे गीत गाउदै मनाएका छन् ।
समितिका संयोजक एवं तरुण दल ककनीका सभापति आदित्य श्रेष्ठ उर्फ विनोदले सडकको अवस्था नाजुक भएकाले हामीले ठेकेदारलाई चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै दबाब दिएका हुन् ।
विरोध कार्यक्रममा नुवाकोट प्याब्सनका अध्यक्ष प्रकाश कुईकेल, ककनी होटल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष लिला तामाङ, नेका सम्पर्क समिति ऋषि कुमार तामाङ, तरुण दल क्षेत्रिय अध्यक्ष यदुमान लामा, ककनी जनजाति संघका अध्यक्ष श्यामकुमार लामा, ककनी बफर जोनका जिवन लामा, सरोकार समितिका रामजी फुँयाल र रमेश लामा लगायत स्थानीयहरूको सहभागीता रहेका थिए ।
ओखरपौवाको सडकखण्डको पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजनको माग समेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘आज सडकमा रोपाई गरेर विरोध गरे । भोली त्यस्तो दिन पनि आउनेछ, घर र कार्यालय घेर्ने ।’
जनताको सुविधाको लागि बन्ने सडकको ठेकेदारको अगागि राज्यले घुँडा टेकेकै हौ त ! संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘यो ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको ककनीको बाटो कालो पत्रे नभएसम्म निरन्तरता दिन्छौं ।’ उनले अबको आन्दोलन डम्पिङ साइट बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।
क्षतिको विवरण सङ्कलन शुरु